Black Hole | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (အဖွဲ့) / Black Hole
IMP + Black Hole အခွေကြမ်းအချို့
စုထားဖြစ်တဲ့ ခွေ ကြမ်းလေးတွေထဲက သီချင်းတချို့ပါ။ 1. ရုပ်သေး – ညီဝင်းထွန်း (IMP) 2. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် – အစိုင်း (Black Hole) 3. အလံစိမ်း – ကိုအောင် 4. လွမ်းသူ့သီချင်း – ညီဝင်းထွန်း (IMP)
October 14, 2010 SONGSLOVER Black Hole Unreleased Albums ညီဝင်းထွန်း IMP Leaveacomment
ဆင်တဲကဖေး selection songs 008
မြန်မာ Rapper တွေ မိဘမေတ္တာအကြောင်း ရေးဖွဲ့သီဆိုထားကြတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေ ပါ။ ၀၁. မိသားစုဘဝ ( 9mm ) ၀၂. အဖေ ( Black Hole ) ၀၃. အဖေ ( ဂျောက်ဂျက် ) ၀၄. အဖေ ( ကြက်ဖ ) ၀၅. အမေ ( ဗျောက်အိုး ) ၀၆. ကမ္ဘာခြားတဲ့ဖေဖေ ( နန်းဆုရတီစိုး ) ၀၇. ငါ့အမေ ( စိုးကြီး၊ sz ) ၀၈. အိမ် ( ရဲလေး ) ၀၉. ထိပ်ဆုံးမုာအမေ ( ရဲလေး ) ၁၀. … Continue Reading →
November 24, 2009 kminsw 9mm စိုင်းစိုင်း ရဲလေး နန်းစုရတီစိုး ဂျောက်ဂျက် ကြက်ဖ Black Hole FireCracker SZ Unreleased Albums4Comments
ဗျူဟာ & သားကြီး 1.North Side2(Intro).mp3 (5.42 MB) 2.1095 Miss.mp3 (7.51 MB) 3.A Pyo Gyi.mp3 (4.2 MB) 4.Away.mp3 (5.22 MB) 5.I am Crazy!.mp3 (4.27 MB) 6.Nong ta ma ya tal lu.mp3 (4.56 MB) 7.Sample.mp3 (4.42 MB) 8.Sexy.mp3 (8.08 MB) 9.Shaggy.mp3 (3.96 MB) 10.So Respect.mp3 (3.37 MB) 11.Write with miss.mp3 (4.42 MB) DOWNLOAD WITH MEDIAFIRE
November 2, 2009 chineseboy သားကြီး Black Hole Unreleased Albums3Comments
ဖန်သားနန်းတော် – Black hole
ဝ၁။ ချစ်ခြင်းရဲ့ အခြားတစ်ဖက် ဝ၂။ ဖန်သားနန်းတော် ဝ၃။ ကျွန်တော့်အကြောင်း ဝ၄။ ထာရစ်ခဲ့ပါ ဝ၅။ ရေဘဝဲ ဝ၆။ မြို့ ပြဘဝရဲ့ဒုက္ခ ဝ၇။ လွမ်းတဲ့အခါ ဝ၈။ ဆောင်းလယ်အိပ်မက် ဝ၉။ ရူးရရုံရတဲ့ဝ ၁ဝ။ ထာဝရဖေဖေ ၁၁။ အမေရေကယ်ပါ ၁၂။ ဖန်သားနန်းတော်
February 1, 2009 shanchina85 အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) Black Hole Myanmar Artist New Myanmar Albums 29 Comments
Black Hole – အဖေ
အစိုင်း (Black Hole) ရဲ့ ခွေကြမ်းထဲကသီချင်းလေးပါ။ “အဖေ” တဲ့… သီချင်းကောင်းလေး ၁ ပုဒ်ပါ။
December 8, 2008 ME *MMA* အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) Black Hole Myanmar Artist Unreleased Albums7Comments
Black Hole – အချစ် = အချစ်
ကိုယ်ချစ်သူကိုအရမ်းချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ပါ… အချစ် = အချစ် တဲ့/ နားထောင်လိုက်ပါဦး…
December 2, 2008 ME *MMA* အဆိုတော် (ကျား) Black Hole Myanmar Artist6Comments